WARBIXIN: Lacag Intee Leeg Ayay ilaa Haatan Suuqa Galiyeen Kooxaha Barcelona Iyo Real Madrid – Kooxda.com
Home 2017 July Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Lacag Intee Leeg Ayay ilaa Haatan Suuqa Galiyeen Kooxaha Barcelona Iyo Real Madrid
WARBIXIN: Lacag Intee Leeg Ayay ilaa Haatan Suuqa Galiyeen Kooxaha Barcelona Iyo Real Madrid
Waxa ayna wali indhaha taageerayaashu qaban suuqa kala iibsiga kooxda ugu waaweyn spain ee Real Madrid iyo Barcelona kuwaas oo sida caadada ah suuqa ka sameeya saxiixyo waaweyn oo waali ah xilli ay ilaa haatan suuqa kala iibsiga awood ku haystaan kooxaha Ac Milan iyo Man City iyo waliba kooxo kale oo reer yurub ah.
Inkasta oo ay ka fogaadeen indhaha taageerayaasha hadana kooxda Barcelona iyo Real Madrid ayaa suuqa ugu jira si qarsoon iyada oo ilaa haatan sameeyay saxiixyo badan.
Kooxda Real Madrid ee ah guulaystayaasha champions league labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay ayaa ilaa haatan shaxdeeda ku xoojisay xiddigo da,yar ah maadama ay xiddigaha shaxdeeda ee waaweyn qaab ciyaareed fiican ku jiraan.
Dhanka kale kooxda Barcelona ayaa ilaa haatan ku dhibaatoonaysa in ay hesho bartilmaameedkeeda ugu weyn ee Marco Verratti iyo Paulinho kuwaas oo ay kooxohoodu diidan yihiin in ay ka iibiyaan xiddigohooda ugu muhiimsan kooxda.
Real Madrid ayaa ilaa haatan suuqa galisay lacag dhan 45.5 Milyan euro oo ay kula soo wareegtay xiddigaha Theo Hernández iyo Dani Ceballos iiyada oo sidoo kale amaah ka soo celisay xiddigo badan oo da,yar ah oo ay ka mid yihiin khadka dhexe ee Marcos Llorente, weeraryahanka Borja Mayoral iyo Daafaca Jesús Vallejo.
Waxa sidoo kale ka tagay Real Madrid Xiddiga khadka dhexe ee James Rodriquez oo amaah laba sano ah ugu biiray Bayern Munich oo 8 Milyan sii bixisay iyo Mariano Díaz oo ay ku iibisay 6.8 Milyan, Diego Llorente oo ay 5 milyan uga iibisay kooxda Real Sociedad iyo Pepe oo si xor ah kooxda uga tagay iyo Fábio Coentrão amaah uga tagay kooxda waxana ay xiddigahaas ka heshay lacag dhan 23 Milyan oo euro.
Barcelona ayaa dhankeeda bixisay lacag dhan 45 Milyan oo euro oo ay kula soo wareegtay 3 xiddig kuwaas oo ay ku xoojisay kooxdeeda.
Kooxda ayaa la soo saxiixatay xiddigii garabka daafaca uga ciyaarayay kooxda Benfica ee Nelson Semedo iyada oo sidoo kale dib ula soo saxiixatay xiddiga reer Spain ee Gerard Deulofeu oo ay kala soo wareegtay kooxda Eveton sidoo kale Barcelona ayaa Heshiis toos ah kula wareegtay daafaca reer Brazil ee Marlon Santos.
Barcelona ayay sidoo kale dib ugu soo laabteen xiddigaha Munir El Haddadi,Thomas Vermaelen,Douglas iyo Sergi Samper kwaas oo amaaho uga soo laabtay kooxda.
Kooxda Catalonia ayaa iibisay 3 xiddig oo ay ka heshay lacag dhan 4 Milyan oo euro kuwaas oo kala ah Cristian Tello,Jérémy Mathieu oo ay kansashay heshiiskiisa iyo Goolhayihii saddexaad ee Jordi Masip.
Sida ay wararku sheegayaan kooxda Real Madrid ayaan wax xiddig ah oo cusub la soo wareegi doonin xagaagan ilaa ay xiddigo iibiyaan.
Dhanka kale Barcelona ayaa ilaa 3 xiddig ku soo dari doonta kooxdeeda kuwaas oo u badnaan doona xiddigo khadka dhexe ah si ay khadka dhexe isaga xoojiso.